ကောင်းကင်ဖြူ: October 2012
တိမ်ညိုညို ဖုံးပါလို့ 
မရွှင်သာ လွမ်းတမိလေ ….
(သြော်) … ဒီအချိန် ရွှေပြည်မှာဖြင့်
နှင်းမှုံတွေ ဝေပါလို့ 
သုံးရာသီ ဘယ် မမှီဘူး
တို့ပြည်မှာဖြင့် သီတင်းကျွတ်တော့ မည် ။
သုံးလူ့ သခင် ဓမ္မအရှင်
ဘိုးဖွား မိဘ ဆရာ အစ
ဦးခိုက် ရှစ်ခိုး ရိုးရာထူးနှင့်
တရပ်မှာနေ တမြေခြားပါလို့ 
လွမ်းတမိ လေ … သီတင်းကျွတ်တော့မည် … ။
ကျနော်ရဲ့ blogger မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများ ထူးမြတ်လှတဲ့ သီတင်းကျွတ်ပွဲတော်မှာ လွမ်းမောခြင်းကင်းစွာဖြင့် ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမိပါတယ် .... ။
Photo: Aye Lwin Oo, Shwe Pachi (Yamaethin) ဓာတ်ပုံကို photoshop အသုံပြုပြီး လက်ဆော့ ထားမိပါသည် ။
Posted by မောင်ဘုန်း at 8:24 AM2comments
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ ။ အချိန်လေးရတာနဲ့တွေးမိတဲ့အကြောင်းအရာလေး တစ်ခုကို လေ့လာဖတ်ရှုရင်း ကျနော်ရဲ့ ယူဆချက်များနဲ့ ပေါင်းစပ်ကာ ဒီ Post လေးကို ရေးမိတာပါ … ။ လွတ်လပ်စွာပဲ ကျနော်ရဲ့ ထင်မြင်ချက်လေးကို ချရေးမိပါတယ် ။ ခေါင်းစဉ်ကိုတော့ “ တန်းတူအခွင့်အရေး နှင့် ဓလေ့ထုံးတမ်း ” လို့အမည်းပေးလိုက်မိပါတယ် ။
ယနေ့အချိန် မှာ “ လူ့ အခွင့်အရေး …. လူ့ အခွင့်အရေး ”ဆိုပြီး နိုင်ငံတိုင်းပြောနေကြတာ သတင်းစာမျက်နှာတွေ က သက်သေ ပါပဲ ။ ဒါပင်မဲ့တစ်နေ့ တခြား ကြီးထွားနေတဲ့ လူတန်းစားကွာဟမှု့ ကိုတော့ ကျနော် တို့ လို ဟိုမရောက်ဒီမရောက် လူတန်းစားများ မျက်မြင်ကိုယ် တွေ့ ပါပဲ ။ လူတန်းစားကွာဟမှု တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး အရင်းရှင် အုပ်ချူပ်မှု တွေပါ တွေ့ ရတတ်ပါတယ် ။ ပညာရှင်တွေကတော့ ဒါကို ၂၁ ရာစုရဲ့ လက်ဆောင်တစ်ခုလို့သတ်မှတ်ထားပါတယ် ။
ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ပါစေ “ လူသားတိုင်း တန်းတူအခွင့်အရေး ” ရှိရမည်ဆိုတဲ့ ကြွေးကြော်သံများကတော့ အားရစရာပါပဲ ။ တစ်ကယ်ပဲ ကျနော်တို့ လူသားများတန်းတူအခွင့်အရေး ရနိုင်မှာလား … ? ။ ကိုယ်တိုင်လည်း ပါဝင် မလုပ်ဆောင်နိုင်တော့ ဘေးကနေကာ လက်ခုပ်တီးပြီး မျှော်လင့်ရတာပေါ့ ။ ကျနော်တို့ လူသားတိုင်းမှာ စာနာတတ်တဲ့ စိတ်အခြေခံလေးတော့ ရှိတတ်ကြပါတယ် ။ ဘယ်သူမဆို ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့ သူကို တွေ့ ရင် အနည်းနဲ့အများတော့ သနားတက်ကြတာ လူ့ သဘာဝပါပဲ ။ ဒီလို ဆင်းရဲမွဲတေတဲ့ လူတန်းစားများအတွက် တန်းတူအခွင့်အရေးဆိုတာ အမှောင်ကမ္ဘာထဲက ဖယောင်းတိုင်လေး တစ်တိုင်လို တန်ဖိုးရှိလှ ပါတယ် ။
တန်ဖိုးရှိလှတဲ့ ဖယောင်းတိုင်လေးလို လူသားတိုင်း တန်းတူအခွင့်အရေး ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်၏ ။ မဖြစ်နိုင်၏ ဆိုတာလေးကို ကျနော် ဥာဏ်မှီသလောက် စဉ်းစားမိရင်း ၊ လှု့ အခွင့်အရေးဆုံးခဲ့ရတဲ့ မှတ်တမ်း သမိုင်းစာမျက်နှာတွေ ကိုလည်း ဖတ်ရှုမိခဲ့ပါတယ် ။ ဒီနေရာမှာ တန်းတူအခွင့်အရေး ဆိုတာအတွက် အတားအဆီးလေးတစ်ခု ကို သတိပြုမိပါတယ် ။ ဒီအကြောင်းအရာလေးကတော့ “ ဓလေ့ထုံးတမ်း ” ဆိုတာပါပဲ … ။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ မတူညီတဲ့ လူမျိုးတွေဟာ မတူညီတဲ့ ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေ ၊ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု့ တွေ အမျိုးမျိုး ရှိတာကြောင့် လူသားတိုင်းအတွက် တန်းတူအခွင့်အရေးဆိုတာဟာ တချို့ နေရာတွေမှာ ဓလေ့ထုံးတမ်း ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာ အောက်မှာ ပျောက်ဆုံးနေတာတွေကို အထင်အရှားတွေ့ ရပါတယ် ။ အဖြစ်များတဲ့ အကြောင်းအရာလေး တစ်ခုကတော့ အမျိုးသား အမျိုးသမီး ခွဲခြားခံရခြင်း ပါပဲ ။ ဓလေ့ထုံးတမ်း အများစုမှာ အမျိုးသားတွေဟာ မြင့်မြတ်တယ် ။ ဒါကြောင့် အမျိုးသားများသာ အုပ်ချူပ်သူ လူတန်းစားပဲ ဖြစ်သင့်တယ် ဆိုတဲ့ အချက်ပါပဲ ။
ဥပမာတစ်ခုအနေနှင့်ပြောရရင် နီပေါနိုင်ငံမှာ ၂၀၀၅ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာ အမျိုးသမီးတွေဟာ မြေယာပိုင်ဆိုင်ခွင့် မရှိသလို ဘဏ်စာရင်း ထားပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူး ။ ဒါအပြင် သမီးဖြစ်သူက အဖေကို အားကိုးရတယ် ။ ဇနီးလုပ်သူက ခင်ပွန်းကို အားကိုးရတယ် ။ အမေလုပ်သူက သားသမီးကို အားကိုးရတယ်လို့ဓလေ့ထုံးတမ်း တစ်ခုလို လက်ခံ ယုံကြည့်ခဲ့တာ တွေ့ ရပါတယ် ။ နီပေါနိုင်ငံမှာ ၂၀၀၅ ခုနှစ် ကျမှ အမျိုးသမီးများ မြေယာပိုင်ဆိုင်ခွင့် ၊ ဘဏ်စာရင်း ထားရှိခွင့် ဆိုတဲ့ တန်းတူအခွင့်ရေးတချို့နီပေါအမျိုးသမီးလူထု ခံစားနိုင်ခဲ့ရတာပါ ။ ဒီဖြစ်စဉ်ကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် တန်းတူအခွင့်အရေးဆိုတာအတွက် ဓလေ့ထုံးတမ်း ကို ပယ်ဖျက်ရတယ် ဆိုတာပါပဲ ။ အမျိုးသား အမျိုးသမီး ခွဲခြားခံရတဲ့ ဖြစ်စဉ် တော်တော်များများဟာ ဓလေ့ထုံးတမ်းကို အခြေပြုနေတာ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်တွေ့ရပါတယ် ။
ကျနော် အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုလောက် ပြောပြချင်ပါသေးတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလူ့ အခွင့်အရေး
လှုပ်ရှားမှု တွေထဲက လိင်လုပ်သားများအတွက် တန်းတူအခွင့်ရေးဆိုတာပါပဲ ။ လိင်လုပ်သားများ တန်းတူအခွင့်အရေး ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဟာ မြန်မာ့ရိုးရာဓလေ့ထုံးတမ်း ကို မျက်ကွယ်ပြုသလို ဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေပါ ။
လိင်တူဖြစ်စေ ၊ ပြည့်တန်ဆာ ဖြစ်စေ ဒီလုပ်ငန်းဟာ မြန်မာ့ရိုးရာ ဓလေ့ထုံးတမ်း နဲ့ကိုက်ညီမှု့မရှိဘူးဆိုတာ အငြင်းပွားဖွယ်ရာ မရှိလောက်ပါဘူး ။ ဒါကြောင့်လည်း ၁၉၄၉ ခုနှစ်မှာ ပြည့်တန်ဆာနှိပ်ကွပ်ရေးဥပဒေကို ပြဌာန်း ခဲ့ပြီး တစ်နှစ်ထက်မပိုတဲ့ ထောင်ဒဏ်ချမှတ်နိုင်တဲ့ ပြစ်ဒဏ်မျိုးကို ထားရှိခဲ့ပါတယ် ။ ဒီနောက်မှာတော့ သုံးနှစ်ထက်မပိုတဲ့ ထောင်ဒဏ် ချနိုင်သည်အထိ ပြင်ဆင်ခဲ့ပြန်ပါတယ် ။ ဒီဥပဒေဟာ ထိရောက်မှု့ ရှိမရှိဆိုတာတော့ တစ်နေ့ တခြားအရေအတွက်တိုးနေတဲ့ လိင်လုပ်သားများက သက်သေပါပဲ ။
ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ လိင်လုပ်သားများကို တန်းတူအခွင့်ရေးဆိုတာနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ကွာဟမှု့ ကြီးမားနေတာတွေရပြန်ပါတယ် ။ ဖြစ်စဉ်များကို ခြုံကြည့်မယ်ဆိုရင် တရားမဝင်ဆိုတဲ့ စကားရပ်ကြောင့် လူသားအချင်းချင်း ညှင်းပန်နှိက်စက် ခံရတဲ့ အခြေအနေမျိုးတွေထိ ရှိနေတယ်ဆိုတာ အားလုံးလည်း သိလောက်မှာပါ ။ နောက်တစ်ချက်က တရားမဝင် ဆိုတဲ့ စကားရပ်အောက်မှာ လိင်လုပ်သားများရဲ့ ကျန်းမာရေးအသိ ပျောက်ဆုံးနေတာကြောင့် လိင်မှတစ်ဆင့်ကူးစက်စေတဲ့ ရောဂါများ ကျနော်တို့ နိုင်ငံမှာ သိသိသာသာ တိုးပွားလျှက်ရှိတယ်ဆိုတာ ကျန်းမာရေးစာမျက်နှာတွေက သက်သေတည်လျှက်ပါ ။
အခုလို လိင်မှတစ်ဆင့်ကူးစက်စေတဲ့ ရောဂါများ တိုးပွားနေတာဟာ တနည်းအားဖြင့် ပြည်သူ့ ကျန်းမာရေးကို တိုက်ရိုက်ထိခိုက်လျှက် ရှိနေပါတယ် ။ မြန်မာနိုင်ငံ ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန ၊ UNAIDS ၊ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့တို့ ရဲ့ ပူးပေါင်းတွက်ချက်ထားသည့် ''HIV Estimates and Projections Asian Epidemiological Model Myanmar 2010-2015 ''တွင် ပါရှိတဲ့ ဖော်ပြချက်များအရ မြန်မာနိုင်ငံမှာ HIV ပိုးကူးစက်ခံရသူ နှစ်သိန်းဝန်းကျင်ခန့်ရှိပြီး တစ်ရက်ကို ၂၃ဦးခန့်ကူးစက်ခံနေရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ် ။ ဒီဖြစ်ရပ်များကို ခြုံပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင် ၁၉၄၉ ခုနှစ် ပြည့်တန်ဆာနှိပ်ကွပ်ရေးဥပဒေရဲ့ တရားမဝင်ဆို တဲ့စကားရပ်ကို အခြေပြုနေတယ်လို့ကျနော် အနေနှင့် ယူဆမိတယ် ။
ကျနော်ရဲ့ blogger မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများ ခဗျာ …. လိင်လုပ်သားများ တန်းတူအခွင့်အရေး ဆိုတာအတွက် မြန်မာ့ဓလေ့ထုံးတမ်းကို ပယ်ဖျတ်ပြီး ဥပဒေဖြင့် စီစစ်ထိန်းချူပ်ကာ ပြည်သူ့ ကျန်းမာရေးအတွက် ပြုလုပ်သင့်သည်လော ….. ????? ။ ဒါမှမဟုတ် မြန်မာ့ဓလေ့ထုံးတမ်းကို ထိန်းသိမ်းကာ တိကျပြတ်သားတဲ့ ဥပဒေတစ်ရပ်ဖြင့် ပြည်သူ့ ကျန်းမာရေးအတွက် ပြုလုပ်သင့်သည်လော …. ?????? ။
ပြည်သူ့ ကျန်းမာရေးအတွက် တန်းတူအခွင့်အရေး နှင့် ဓလေ့ထုံးတမ်း တစ်ခုခုကိုတော့ ရွေးချယ် လုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ အချိန်ရောက်ပြီလို့တွေးမိရင်း ဒီ post လေးကို အဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ် … ။
ကျနော်ရဲ့ blogger မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများနဲ့မတော်တဆဖတ်မိသူအပေါင်း ကျန်းမာပျော်ရွှင်ကြပါစေ ။
နီပေါ အမျိုးသမီးများရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးတိုက်ပွဲ (ခင်မမမျိုး)
မြန်မာ အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ သတင်းအချက်အလက်
ဓာတ်ပုံကို google မှရယူခဲ့ပါသည်
Posted by မောင်ဘုန်း at 9:14 AM7comments
Posted by မောင်ဘုန်း at 7:57 AM 8 comments